पत्नीलार्ई नायिका बनाउन खोज्दा ऋषि धमला टाट ! यसरी उड्यो धमलाको करोडौं ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/पत्नीलार्ई नायिका बनाउन खोज्दा ऋषि धमला टाट ! यसरी उड्यो धमलाको करोडौं !
चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले आफ्नी पत्नीलार्ई नायिका बनाउन चलचित्रमा लगानी गरेको देखियो । पत्रकार धमलाले आफ्नी पत्नी एलिजा धमलालार्ई नायिका बनाउन करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी चलचित्र अनुरागको निर्माण गरे । तर, चलचित्र व्यापारको हिसाबले असफल भयो । उक्त चलचित्र सिनेमा हलमा कहिले लाग्यो, कहिले बाहिरियो भन्नेसम्म दर्शकहरूले थाहा पाइएनन् । नायिका धमला पनि चलचित्र अनुरागपछि अरू चलचित्रमा देखापरेकी छैनन् । चलचित्र क्षेत्रलार्ई उद्योग र व्यापार व्यवसायको रूपमा लिने गरीन्छ ।
तर, नेपालमा कतिपयले चलचित्र निर्माणलार्ई रहर र सोखको रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफन्तलार्ई कलाकार बनाउन नायक÷नायिका बनाउन निर्देशक बनाउन चलचित्रमा प्रवेश गराउनका लागि लगानी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले आफ्नी पत्नीलार्ई नायिका बनाउन चलचित्रमा लगानी गरेको देखियो । पत्रकार धमलाले आफ्नी पत्नी एलिजा धमलालार्ई नायिका बनाउन करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी चलचित्र अनुरागको निर्माण गरे ।
तर, चलचित्र व्यापारको हिसाबले असफल भयो । उक्त चलचित्र सिनेमा हलमा कहिले लाग्यो, कहिले बाहिरियो भन्नेसम्म दर्शकहरूले थाहा पाइएनन् । नायिका धमला पनि चलचित्र अनुरागपछि अरू चलचित्रमा देखा परेकि छैनन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफ्ना पत्नीका लागि आफन्तका लागि चलचित्रमा लगानी गर्ने पत्रकार ऋषि धमाला मात्र छैनन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यस्ता धेरै निर्माताहरू छन् । विगत ४० को दशकका चर्चित नायक भुवन केसीले पनि आफ्नी पत्नी सुष्मिता केसीलार्ई नायिका बनाउन चलचित्र निर्माण गरेका थिए । नायक भुवन केसीले चलचित्र करोडपति निर्माण गरी आफ्नी पत्नी सुष्मिता केसीलार्ई नायिकामा डेब्यु गराएका थिए ।
नायिका सुष्मिता केसीलार्ई आफ्नो होम प्रडक्सनको चलचित्रमा मात्र अभिनय गर्ने नायिका भनेर पनि त्यसवेला चर्चा चल्ने गरेको थियो । विगत चालिसको दशकको लोकप्रिय एक्सन नायकको रूपमा चर्चित नायक शिव श्रेष्ठले पनि अफ्ना छोरा शक्ति श्रेष्ठलार्ई नायक बनाउन चलचित्रमा लगानी गरेका थिए । त्यसैगरी, विगत कि चर्चित नायिका निर्माता निर्देशक झरना थापाले पनि आफ्नी छोरी रेहाना थापालार्ई नायिका बनाउन चलचित्र ए मेरो हजर ३ को निर्माण गरेकी छन् । त्यसैगरी, हास्य कलाकार, टेलिभिनमा राता मकै उपनामले चर्चित कलाकार किरण केसीले पनि आफ्नो छोरा सुदन केसीलार्ई निर्देशक बनाउन चलचित्र दाल–भात–तरकारीको निर्माण गरे ।
त्यसो त नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा मात्र नभई बलिउड र हलिउड नातावादमा नै चलेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला । पछिल्लो समयमा मात्र नभई विगतमा पनि आफन्तका लागि चलचित्रमा लगानी नगरेका होइनन् । विगत चालिसको दशकमा नै आफ्ना छोरा विजय लामालार्ई नायक बनाउन हेम लामाले चलचित्र आदर्श नारी निर्माण तथा निर्देशन गरेका थिए । त्यसवेला नायक विजय लामालार्ई बाबुले बनाएको चलचित्रमा नायक भएको भनेर टिप्पणी गरीन्थ्यो । नेपाली चलचित्र निर्माण हुन थालेको पनि पाँच दशक भइसक्यो अहिलेसम्म पनि यस्तै प्रवृतिले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।
आफन्तद्वारा प्रवेश गराइएका थप्रै कलाकारहरू नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा २ दशकसम्म एकछत्र राज गरेका राजेश हमाललार्ई पनि मामा दीपक रायमाझीले सर्वप्रथम नायक बनाएका थिए । रायमाझीले चलचित्र युगदेखि युगसम्ममा राजेश हमाललाई नायकमा डेब्यु गराएका थिए । त्यसैगरी, दीपक रायमाझीले नै आफ्ना अर्का भाञ्जा किरणप्रताप केसीलार्ई चलचित्र प्रियसीको नायकमा डेब्यु गराएका थिए । किरणप्रताप केसी भने चलचित्रमा सफल हुन सकेनन् । नायक गजिट विष्टले पनि आफ्ना आठ वर्षका छोरा सौगाद विष्टलाई निर्देशक बनाउन चलचित्र निर्माण गरेका थिए । त्यसैगरी, आफ्ना भतिजा आर्यन अधिकारिलार्ई नायक बनाउन निर्देशक आकाश अधिकारीले चलचित्र निर्माण निर्देशन गरेका थिए ।
विगतमा थुप्रै चलचित्र निमाण गरीसकेका निर्माता शेखर कोइरालाले पनि आफ्नो छोरा संयोग कोइरालालार्ई चलचित्रको नायकमा डेब्यु गराएका थिए । त्यसो त आफैले लगानी गरी चलचित्रमा नायकक बनेकाहरू पनि नभएका होइनन् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा । आफ्नी छोरीलाई नायिका बनाउन सुशीला रायमाझीले खलनायक पवन मैनालीसँग मिलेर चलचित्र निर्माण गरेकी थिइन् । उनले चलचित्र पिँजडामा आफ्नी छोरी प्रसिद्धिका रायमाझीलाई नायिकामा डेब्यु गरेकी थिइन् ।
नायिका प्रसिद्धिका रायमाझी पिँजडापछि चलचित्र धनवानमा नायिका भएर अभिनय गरेपछि चलचित्र क्षेत्रबाट नै हराइन् । आफन्तले निर्माण गरेको चलचित्रमा अभिनय गरेका र आफन्तले लगानी गरी चलचित्रमा प्रवेश पाएका धेरैजसो कलाकारहरूले चलचित्रमा निरन्तरता भने दिन सकेका छैनन् । यस्ता धेरैजसो कलाकारहरू एक २ चलचित्रमा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ ।